“Qofka Aan Ahay Marnaba Raaligelin Kama Bixinaayo – Rashford Oo Ka Jawaabay Cunsuriyadda Loo Geysanayo – Garsoore Sports
“Qofka Aan Ahay…
“Qofka Aan Ahay Marnaba Raaligelin Kama Bixinaayo – Rashford Oo Ka Jawaabay Cunsuriyadda Loo Geysanayo
Weeraryahanka Manchester United ayaa amaanay asxaabtiisa kooxda iyo taageerada badan ee uu helay kaddib rigooradii uu qasaariyay fiinaalii Euro 2020 ee Wembley.
Marcus Rashford ayaa sheegay in uusan weligii dareemin “xaalad ka sharaf badan” markii uu Ingiriiska u matalayay Euro 2020 isla markaana “uusan raali galin ka bixin doonin cida aan ahay iyo meesha aan ka imid” kaddib markii lagula kacay xadgudub cunsurinimo kaddib guuldaradii Saddexda Libaax ee Talyaaniga.
Kooxda Gareth Southgate waxaa lagu garaacay 3-2 rigoorayaashii fiinalka Euro 2020, iyadoo Rashford, Jadon Sancho iyo Bukayo Saka ay ahaayeen seddexda ciyaaryahan ee qasaariyay rigoorayaasha Saddexda Libaax, taasoo keentay in seddexdaba ay helaan farriimo cunsuriyad xun ah oo Internetka loogu soo gudbinayo.
Isagoo milicsanaya khaladkiisii rigoorayaashii ugu dambeeyay, weeraryahanka Manchester United Marcus Rashford ayaa qirtay in “wax aanu si sax ah u dareemin” kahor inta uusan u dhaqaaqin inuu rigoorada tuuro, halka uu wacad ku maray in Seddexda Libaax ay “dib u soo laaban doonaan iyagoo xooggan”.
“Waxaan kusoo barbaaray isboorti waxaan rajeynayaa inaan aqriyo waxyaabaha la iga qoray aniga. Hadday tahay midabka maqaarkayga, meeshii aan kusoo koray ama, ugu dambeyn, sida aan u go’aansado inaan waqtigayga ku qaato garoonka dibadiisa, waxaan qaadan karaa dhaliil ku aaddan waxqabadkeygii maalintaa oo dhan, rigooradeeydii ma fiicneyn, waxay ahayd inay gudaha gasho laakiin marnaba raali gelin kama bixin doono cidda aan ahay iyo meesha aan ka imid.”
“Ma dareemin sharaf ka weyn in aan Saddexdaas Libaax ku xirto xabadkeyga oo aan arko qoyskeyga oo igu farxaya iyagoo ku dhex jira tobanaan kun oo ruux. Waxaan ku riyooday maalmo sidan oo kale ah. Farriimaha aan helay maanta waxay ahaayeen kuwo xamaasad leh markii aan arkay jawaabaha Withington ayaan ilmeeyay.”
“Bulshadda (Withington) marweliba gacmaha ayay igu duubaan si ay kor iigu celiyaan, Waxaan ahay Marcus Rashford, 23 sanno jir madoow ah oo kasoo jeeda Withington iyo Wythenshawe, Koonfurta Manchester. Haddii aanan waxkale heysan, taas ayaan heystaa.”
“Waad ku mahadsantihiin dhammaan farriimaha naxariista leh, Waan soo laaban doonaa anigoo xooggan. Waan soo laaban doonnaa inagoo xooggan.”
Kooxda Liverpool Oo Si Rasmi Ah U Billoowday Isku-diyaarinta Xilli-cayaareedka 2021-2022